Media NP – Page 299 – Medianp
शुक्रबार, ०६, बैशाख, २०७६
एक यौनकर्मी युवतीको हृदयविदारक प्रेम र मुक्तिको कथा
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५१३:०६0
काठमाडाैँ ५ वैशाख । ‘पहिले त कहिले काहाँ मात्रै कोठीमा आउँथ्यो । कहिले मसँग बस्थ्यो त कहिले अरु केटीसँग बस्थ्यो । तर बिस्तारै उ मेरो लागि मात्रै कोठी आउन लाग्यो । थाहै भएन कसरी उस्को
‘सिंघम’मा अजयलाई खेलाएका रोहित शेट्टीले ‘सिंबा’ मा किन लिएनन् ?
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५११:५०0
काठमाडौँ, ५ वैशाख । बलिउड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टीले ठूलो पर्दाको फिल्म ‘सिंघम’पछि अब ‘सिंबा’ फिल्म लिएर आउने तयारी गरेका छन् । यस फिल्मको मुख्य भूमिकामा रणवीर सिंह छन् । निर्देशक शेट्टीका अनुसार ‘सिंबा’ मा एक
करण जौहरको ‘कलंक’ मा संजय दत्त र माधुरीको जोडी
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५११:३२0
काठमाडौँ, ५ वैशाख । बलिउडका फिल्म निर्देशक करण जौहरले निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘कलंक’को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । करण जौहरको आफ्नै प्रोडक्सन धर्माले बुधबार फिल्मको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो । करणले झण्डै १५
महोत्तरीमा आँधीहुरीका कारण दुईको मृत्यु
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५१०:५६0
गौशाला, ५ वैशाख । गएराति महोत्तरी जिल्लामा आएको भीषण आँधीहुरीका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कुँवेर कडायतका अनुसार मंगलबार साँझ ७ः३० बजेतिर आएको भीषण आँधीहुरीमा परेर जलेश्वर नगरपालिका–७
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी दूध उपयोग गर्ने देश
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५१०:४९0
काठमाडौँ, ५ वैशाख । तपाइलाई थाहा छ ? विश्बमा सबै भन्दा बढी दूध उपयोग देश कुन हो ? युनएन एफओ को तथ्यांक अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी दूध फिनल्यान्डले उपयोगे गर्छ । जहाँ वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३६१
वन्यजन्तुको अवलोकनमा जाँदै हुनुहुन्छ ? आनीबानी थाहा पाउनुस्, नत्र ज्यानै जाला
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५१०:०२0
चितवन, ५ वैशाख । चितवन निकुञ्ज आसपासमा वन्यजन्तुको आनीबानी थाहा नहुँदा कतिपय अवस्थामा मानिस आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालुलगायत वन्यजन्तुको आनीबानी थाहा पाए दुर्घटना हुनबाट जोगिन सकिन्छ । यसप्रति सचेत
रसुवाबाट हराएको चालिस दिनपछि नुवाकोटमा शव भेटियो
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५०९:४८0
नुवाकोट, ५ वैशाख । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–२ डाँडागाउँका चोक्ता तामाङ हराएको ४० दिनपछि मृतावस्थामा नुवाकोटमा भेटिएका छन् । विदुर नगरपालिका–७ तुप्चेस्थित त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको बाँधस्थित त्रिशूली नदीमा मंगलबार अपराह्न ४ बजे भेट्टिएको शव फागुन २४
मुश्लिमसँग बिवाह गरेकोमा करिनालाई गालिगालौज
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५०९:३६0
काठमाडौँ, ५ वैशाख । भारतको जम्मु काश्मिरको कठुवामा ८ वर्षकी बालिकाको समुहिक बलात्कारपछि हत्याको यत्रतत्र विरोध भइरहेका बेला बलिउड स्टार करिना कपुरले पनि आफ्नो इन्स्ट्रा ग्राममा विरोध स्वरुप एउटा फोटो अपलोड गर्दै उनले बलात्कारको विरुद्ध
‘आधि रातमा’ को म्युजिक भिडियो बजारमा (भिडियोसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५०८:५५0
काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाली आधुनिक गीत ‘आधि रातमा’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मेलिना राईको आवजमा रहेको गीतको शब्द सशी लामिछानेको हो भने गीतमा नेत्रबन्धन केसीले म्युजिक भरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा सशी
सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रणाली
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५१५:५७0
काठमाडौँ, ४ वैशाख । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्नका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गरेको छ । विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम इन्टरनेटमा राखी व्यवस्थित बनाउन थालेको सामाजिक सुरक्षा शाखाका शाखा
Previous 1 … 298 299 300 … 306 Next
मानसिक स्वास्थ्य समस्या घटाउन उपयुक्त मनोविमर्श सेवा जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाई
भारतीय नम्बर प्लेटका कार र मोटरसाइकल चढेर नेपाली वंशजको नागरिकता लिनेको भीड
चितवनमा जङ्गली बँदेलको तस्करी
हाल चर्चामा रहेको रंगमञ्चमा ‘मि टू’ बारे नायिका दिया मास्केको यस्तो बयान
डोटीमा आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोगमा वृद्धि, ढिके नुनको प्रयोग हरायो
घरेलु विधिबाट बनाइएको फेसप्याक प्रयोग गरी अनुहारमा ल्याउनुहोस् जादुमय चमक, मात्र १५ मिनेटमा (भिडियो सहित)